बच्चालाई आमाको दूध कति उमेरसम्म खुवाउने? -
२०७६, २१ भाद्र शनिबार १०:०४ September 7, 2019 clickonLeaveaComment on बच्चालाई आमाको दूध कति उमेरसम्म खुवाउने?
सबैलाई थाहा छ, आमाको दूूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६महिनासम्म स्तनपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर कति वर्षसम्म स्तनपान गराउने?
बेलायतमा जबसम्म आमा र बच्चा चाहन्छन्, त्यतिबेलासम्म स्तनपान गराउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ। स्तनपानबाट बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र उनीहरु बिरामी पर्दैनन्। बेलायतका नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) ले पनि स्तनपानका लागि कुनै समयसीमा तोकेको छैन। ६ महिनासम्म आमाको मात्र दूध खुवाउने सल्लाह दीन्छ। त्यसपछि दूधका साथै अन्य खाद्यपदार्थ खुवाउन सकिन्छ।
एक आँकलनानुसार बेलायतमा ८० प्रतिशत महिलाहरु स्तनपान गराएको केही समयपछि नै छाड्छन्। ६वर्षसम्म आमाको दूध पाउने बच्चाको संख्या एक तिहाई मात्र हुन्छ।
सन् २०१६ मा प्रकाशित एक अन्तर्‍ाष्ट्रिय अनुसन्धानानुुसार बेलायती महिलाहरु सबैभन्दा कम समयसम्म स्तनपान गराउनेमा पर्छन्। महिलाहरु सार्वजनिक स्थानमा स्तनपान गराउन लाज मान्छन्, यसकारण पनि उनीहरु चाँडै नै स्तनपान गराउन छाड्छन्।
टि २० क्रिकेटमा मालिंगाको चमत्कारी प्रदर्शन
स्वस्थ रहन महिलालाई यस्तो सुझाव
२०७५, २७ चैत्र बुधबार ००:२२ April 10, 2019 clickon
मधुमेह रोगीका लागि जानकारी
२०७५, २३ जेष्ठ बुधबार २०:४२ June 12, 2018 clickon
२०७५, १६ माघ बुधबार ०४:४९ January 30, 2019 clickon